The kuwedzera kuitika kune ari zvakawanda zvakatipoteredza-ushamwari akaita kwakamutsa vazhinji, uye dzaisiyana mitema matanho munyika yose, mumaguta makuru nemisha maduku zvakafanana. Mumwe zviratidzo zvakawanda izvi kunowedzera renewable simba mune vanhu zuva nezuva muupenyu uye basa munyaya yakanga kumbobvira vafunga nezvechisarudzo pamberi. Imwe nzvimbo dzakadaro mugwagwa vakachengeteka, umo kushandiswa pazvinhu zvose kubva mumugwagwa zviratidzo kuti motokari mwenje kuti zvichikurukura nehurongwa, saka kuita mugwagwa ezvinhu mamwe zvinoonekwa pane imwe isingadhuri mutengo, uye zvakare kuchengetedza vose mari uye nyika iri mukuita.
Nepo zviratidzo mumugwagwa haufaniri chaizvoizvo kuti chiedza kuita basa ravo, Lights zvachose vane chimwezve vanobatsirwa kuita vatyairi zvakawanda anoziva. Inoshandisa simba rezuva mugwagwa zviratidzo vakapakata akatungamirira zviedza anopa nzira nani maonero, zvose masikati uye usiku (Unogona kuziva mitemo yavo oparesheni pano) Anopa zvakanaka kushanda siyana kunyange panguva utsinye mamiriro ekunze izvo kazhinji pave tsaona-asingatani ezvinhu. Zvisinei kwavakanga - dzimwe panosangana, yokuchinja kana njanji kuyambuka, zviratidzo izvi zvinovimbisa kuchengetedzwa kwakanyanya kune vanofamba netsoka nemotokari zvakafanana.
Railroad takayambuka anonongedzera kuti kushandisa chiedza chezuva simba inogona kushandiswa zvose maindasitiri dzinodengenyeka uye mumaruwa. Products izvi mhando, zvakaita se https://www.solarlightingitl.com/solar-railroad-crossing-systems/ tarisa zvitima zvichiuya kuburikidza nemasensa asina waya, uye kamwe vatanga chiratidzo, Ivo Activate kuyambuka mwenje uye ruzha kuti uende mberi kusvikira nechitima dzapfuura uye zvinokuchengetedzai kuyambuka Makwara. anonongedzera izvi kakawanda kupinda vaviri vaviri ari mumwe parutivi chitima mazambuko, uye Wireless kubatana Minamato haipindurwe pamusoro uye kure panguva imwecheteyo. Zvichida yakanakisisa chinhu pamusoro kugadzwa avo ndechokuti hapana zvimwewo mabhokisi kana refu netambo zvinobatanidzwa.
Unoda embed yedu Blog romukova “Benefits Of Solar Powered Railroad Crossing anonongedzera And Road Signs” pana yako nzvimbo? kana Unogona kutora mapikicha edu uye rugwaro uye kutipa chikwereti ane kubatana uku Blog romukova. Kana tinya pano: https://iframely.com/embed/https://www.saveatrain.com/blog/solar-powered-railroad-crossing-signal/?lang=sn ‎- (Mupumburu pasi zvishoma kuona Embed Code)
EcoFriendlyTravel GreenEnergy IndustrialEngineering RenewableEnergy Simba rezuva Train Travel